ကိုစေးထူးရေ.. ကျနော် ခန့်မှန်းတာတော့ ၁၃ ခုပဲ မှန်တယ်... အစ်ကို့ သူငယ်ချင်းပြောသလို ပြောရရင်တော့.. ကျနော် လည်း.. ရှေ့လျှောက် ၄၀% လောက် ခံရကိန်းရှိတယ်... :p
ညီမလေးကတော့ အကုန်လုံးကို တကယ်ရယ်တယ်လို့ကို မထင်ဘူး... ဟန်ဆောင်ရယ်တယ်လို့မထင်တာ နှစ်ယောက်ထဲ...ဒါပေမဲ့ ၁၃ခုမှန်တယ်...ဟီဟီ...
Jun 14, 2007, 11:37:00 PM
၁ ခုလျော့တယ် ၁၂ ခုပဲမှန်တယ်.
ကဲ ရုပ်မမြင်ရတဲ့ အင်တာနက် ချက်လောကမှာ စာလုံးကို ကြည့်ပြီး အပြုံးစစ်မစစ် ဘယ်လိုခွဲမလဲ.. အောက်က အထဲမှာ ဘယ်ဟာက တကယ်ပြုံးတဲ့ အသံလဲ.
Jun 15, 2007, 12:06:00 AM
ပြုံး တုံ့ မပြုံးတုံ့ နှင့် ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Jun 15, 2007, 12:17:00 AM
မပန်ရေ...ဟားဟား၊ ဟီးဟီး၊ ခွိခွိ၊ ခစ်ခစ်၊ အဟိ တို့ကို တကယ်ပြုံးတဲ့ အသံလို့ထင်ပါကြောင်း...:P
Jun 15, 2007, 1:30:00 AM
ဟားဟား ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပါပဲ.. အပြုံးတုများစွားနှင့် ပြုံးနေရပါကြောင်း.. တကယ်တော့ မပြုံးချင်ဘူးဗျ.. ဒါပေမဲ့ အမေကပြောတယ်လေ..လူအောက်ကျို့လို့ မသေဘူးဆိုလား..ပြုံးတာပြုံး လို့ ကျွန်တော့ကို ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်တော်ပြုံးချင်တာ တကယ်စိတ်ပါလက်ပါ ပြုံးတာပဲ ပြုံးချင်ပါတယ်။
Jun 15, 2007, 9:05:00 AM
မှတ်သားစရာပဲ ... မှတ်ထားအုံးမှ .. ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ အပြုံးစစ်မစစ် ခွဲတဲ့ဟာ ၀င်မကြည့်ရသေးဘူး။ နောက်မှ ကြည့်တော့မယ်။
ကျမကတော့ စိတ်မပါရင် ပြုံးကို မပြုံးဘူး ... ပြုံးလိုက်ရင်လဲ မဲ့သလိုမျိုးကြီးမို့ ...
Jun 15, 2007, 10:27:00 PM
၁၂ ခု မှန်တယ်ဗျို့ ... ၆ ခုကတော့ နည်း လွန်းတယ် ထင်ပါ့ ... ကိုသံလွင် လူကဲခတ် ညံ့သေးတာပဲ ... :P
တကယ်တော့ ကျမလည်း ကြက်ကန်းဆန်အိုး တိုးသွားတာလား မသိ ...
Jun 16, 2007, 6:25:00 AM
အနော်တော့ ၉ ခုပဲ မှန်တယ်ဗျို့.. ဟဲဟဲ.. ၅၀ ရာနှုန်းလောက် ခံရကိန်း ရှိတယ်..
အခုတည်းက အနားက ကောင်တွေကို သတိထားမှ.. အထူးသဖြင့် ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့ ငနဲပေါ့.. ၀ူးထွားထွား
Jun 18, 2007, 1:25:00 AM
ဒီပို့စ်ကို လာဖတ်ပြီးတော့ အပြုံးအတုအစစ် ခန့်မှန်းသူတွေ အားလုံး ကျနော့်ထက် လူကဲခတ်တော်ကြတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲလား။ :D အရေးထဲမှာ ဒိုရာက ပဟေဠိ လာထုတ်နေပါလား။ ၀ူးထွားထွားက လွဲရင် အကုန် အစစ်ဗျာ။ (၀ူးထွားထွားက ဒိုရာရယ်တဲ့ အသံမို့လို့ နှိပ်ကွပ်တာ :D) သို့သော်…….. :D အားရပါးရကြီး လာရောက် အားပေးကြသူများအား အသေအလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ :)
Jun 18, 2007, 7:38:00 PM